Ndiyangqina! Okanye ndim? | Martech Zone
Ndiyangqina! Okanye ndim?
NgoMgqibelo, uJanuwari 27, 2007 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
UPaula Mooney ubhale kutshanje ukungena malunga neebhlog. Ndifuna ukwazi ukuba ucinga ntoni:
Ukunyaniseka, kukho iibhlog ezimbalwa endizindwendwelayo apho ndifunda khona ... zonke zenzeka ukuba zihlekise. Ndizabalaza ukubambelela kwiiblogi ezixubayo okanye ezifunga ngaphandle kwesizathu, nangona kunjalo. Ukuba kuthethwe ngomsindo, ngokuqinisekileyo andizukuphinda ndibuye okwesibini.
Izizathu ezithathu zokuba kutheni ungafanele ucofe ibhlog yakho:
Amagama akho kumnatha anokujikeleza ixesha elide kunokuba uzakuba njalo. Kuya kuba lilishwa ukukhunjulwa ngokuncwina.
Maninzi amagama ekusenokwenzeka ukuba awuzange uve nokuwa… zama amanye amatsha.
Ukuxambulisana kunokucaphukisa umntu, ukungangxami akuyi kukhubekisa mntu.
Yabelana ngeengcinga zakho. Ngaba ndiba ngu i-curmudgeon? Qaphela: Akukho kubambana!
Jonga, nanko esiza uFlex!
NgoJanuwari 27, 2007 ngo-10:38 PM
Oku kulungile! Ndihlekise nje, Douglas.
NgoJanuwari 28, 2007 ngo-1:02 PM
Ndifumene elikhonkco livuliwe Lifehacker namhlanje kwabo bantu badinga isigama:
NgoJanuwari 28, 2007 ngo-1:17 PM
Enye yeeblogi endizilandelayo ibandakanya isixa esibalulekileyo sokuthuka. Umntu ukhathazekile ngokucacileyo ngenxa yendlela ishishini lakhe elithatha ngayo, kwaye kubonakala kuphela indlela iimvakalelo zakhe ezinokubonakaliswa ngokwenene. Akabonakali ukuba afunge izithuba ezinxulumene non-ishishini. Nangona ndingacingi ukuba ulwimi lwakhe lufanelekile, kucacile ukuba iimvakalelo zakhe zibuhlungu, kwaye ndinokuyithatha kulwimi alukhethayo.
Andiyi kuthuka kwiblogi yam. Ndifuna ukuba abo babaleka kumxholo wam bagxile kumxholo, hayi ulwimi olusetyenziswayo ukuwuhambisa.
NgoJanuwari 28, 2007 ngo-4:43 PM
Ukuthukana kukuzicima kum, kwaye ndibona abafazi abaninzi besebenzisa izithuko okanye izithuko kungenjalo ngekufumane umlomo ogcwele isepha ngeentsuku zam. Kubonakala ngathi bacinga ukuba ibenza babonakale bepholile, okanye kufuneka bazive bezimele ngokwaneleyo ukuba bangazikhathazi malunga nokuba abantu bacinga ntoni. Abantu abaninzi abayi kukuxelela; baphepha nje ibhlog yakho! Ukuba umntu akanako ukuzibamba ekusebenziseni amagama esiqalekiso kwibhlog yakhe, akufuneki ukuba abhlogi. Njengoko bekutshiwo, iya kuba malunga neenjini zokukhangela ixesha elide kunokuba sifuna ukucinga!
NgoJanuwari 28, 2007 ngo-7:04 PM
Ndicinga ukuba ukufunga ngokumodareyitha kulungile. Kodwa ukuba zonke ezinye iiposti zithetha ngezithuko, ndingayeka ukufunda.
NgoJanuwari 29, 2007 ngo-2:00 PM
Enkosi ngokuqalisa ingxoxo, Doug. Andikhathali kukuva okanye ukufunda ukuthuka, kwaye andizukuyenza ngokwam. Ngokuqinisekileyo kukho iindlela ezichuliweyo zokuthetha, kwanaxa unomsindo. Ukuba ndifunda iblogger eyenza kube kanye, ayizukundinqanda ukuba ndibuye. Ukuba iba ngumkhwa, ndingayiphepha loo ndawo.
NgoJanuwari 29, 2007 ngo-2:33 PM
Ngokwam ndicinga ukuba izithuko ngamagama nje anempembelelo ekhethekileyo. Sebenzisa ngokufanelekileyo, kungekhona ngokukhululeka.
NgoJanuwari 29, 2007 ngo-2:52 PM
Sterling, ndicinga ukuba ukusebenzisa izithuko zempembelelo ekhethekileyo kubonisa indlela encinci esinayo ngolwimi lwethu okanye ulwimi lwesiNgesi. Kum, akukho ndlela 'ifanelekileyo' yokuqalekisa okanye ukufunga. Iyandikruqula into yokuva abantu besebenzisa amagama athile ngokungathi aqhelekile, amagama emihla ngemihla (aye eba ngolo hlobo kwabaselula), kanti ngokwenene benzakalisa isimilo sabo.
NgoJanuwari 29, 2007 ngo-3:00 PM
Kwaye kutheni la mazwi ekhubekisa? Ngenxa yokuba zivela kwiilwimi zaseSaxon okanye zeCeltic. Ukuba ndithe "copulate!" okanye “ukuzithuma!” akukho mntu ukhubekayo. Ekugqibeleni, lucalucalulo nje lobuhlanga obelugcinwe kangangewaka leminyaka.
NgoJanuwari 30, 2007 ngo-4:09 PM
Mna ngezihlandlo ezithile, andikhathali ukuyenza loo nto kwibhlog yam kunye ne-macho ruff ejikeleze imiphetho yenkwenkwe ehluphekayo, andifungi kakhulu. Bendikwithaveni eBaltimore mva nje kwaye amanenekazi ama-2 ebesebenzisa amagama kunye ne-mf wording kangangokuba ndiye ndakhubeka. Khange ndiphawule kodwa ibindikhathaza. Ndifumene ubulumko nokunyaniseka kukaPaula kungaphaya kombuzo. Ukuba uPaula uthi ayilunganga, nantso unayo
NgoJanuwari 30, 2007 ngo-4:21 PM
JD, umyeni wam uthi, xa esiva umfazi ethetha ngolo hlobo, kumenza avakale ngathi aw…. Yincoko nje emdaka kum, kwaye akunyanzelekanga ukuba uyenze. Kodwa, kubonakala ngathi leyo 'yeyona ndlela' ngoku phakathi kwabaninzi, kwaye andicingi ukuba iyabanceda nakancinci.
NgoJanuwari 31, 2007 ngo-5:36 PM
Barb, umyeni wakho ulumkile kwaye ndiyavuma.
NgoJanuwari 30, 2007 ngo-4:36 PM
Ndiyavuma ukuba i-99% yexesha, ukuqalekisa akuyomfuneko ngokupheleleyo. Kukho, nangona kunjalo, iimeko ezimbalwa xa iyeyona ndlela ilungileyo yokubonisa indlela oziva ngayo ngento ethile. Ngokwam, andikhumbuli ndiqalekisa kwiposti yebhlog, kodwa andizukuyikhupha nayo.